पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवाली हटाइए, डा. पोखरेल नियुक्त
पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवाली हटाइए, डा. पोखरेल नियुक्त	By नवीन सन्देश on	२७ पुष २०७३, बुधबार १६:४६
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीलाई हटाएको छ । उनीलाई हटाएर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा डा. गोबिन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई हटाएर डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । डा. पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts १३ असार २०७४, मंगलवार ११:४९ 0	लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको शत् प्रतिशत हकप्रद निष्कासन
१३ असार २०७४, मंगलवार ११:१४ 0	हुण्डाईको इयोन ट्याक्सी किन्ने भुकम्पपीडितलाई ‘शतप्रतिशत नगद फिर्ता योजना’
१३ असार २०७४, मंगलवार १०:४६ 0	मूल्य घटाएपछि इन्डक्सन चुलोको बिक्री बढ्याे
१३ असार २०७४, मंगलवार १७:०२ 0
मतदानका लागि छ लाख यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिए
१३ असार २०७४, मंगलवार १६:४७ 0
साझा यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई भाडा नलाग्ने
१३ असार २०७४, मंगलवार ११:४९ 0
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको शत् प्रतिशत हकप्रद निष्कासन
१३ असार २०७४, मंगलवार ११:३३ 0
विप्लवका एक कार्यकर्ताको आफैँले बोकेको बम विस्फोट हुँदा मृत्यु
१३ असार २०७४, मंगलवार ११:१४ 0
हुण्डाईको इयोन ट्याक्सी किन्ने भुकम्पपीडितलाई ‘शतप्रतिशत नगद फिर्ता योजना’
१३ असार २०७४, मंगलवार १०:४६ 0
मूल्य घटाएपछि इन्डक्सन चुलोको बिक्री बढ्याे
४ असार २०७४, आईतवार ११:१८ 0
छोरी साराले फिल्म खेल्न लाग्दा सैफ असन्तुष्ट